दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार २७। शुक्रबार। इ.स. २०१९ जुलाई १२। - Sutra TV Sutra TV
दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार २७। शुक्रबार। इ.स. २०१९ जुलाई १२।
मेष : बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। कसैको हस्तक्षेपले तपाईंको प्रियतमासँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुन। तपाईं काममा जोड दिने हुनुहुन्छ भने रीस उठ्नेछ – तपाईंले कुनै पनि निर्णय लिनु अघि अरूको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। तपाईंको जोडीले आज तपाईंलाई केही हानि पुर्याउन सक्छ।
वृष : धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। तर्क र टकराव अनि अरूमा अनावश्यक दोष खोज्नेबाट बच्नुहोस। आज रोमान्सको लागि कुनै आशा छैन। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। तपाईंको जोडीले नभएको वैवाहिक जीवन बारेमा तपाईंलाई परेशान गर्न सक्छन्।
मिथुन : एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आफ्नो राय छोराछोरीलाई जबरजस्ती थोप्नाले तिनीहरूलाई परेशान गराउन सक्छ। तिनीहरूलाई बुझाउनु राम्रो छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकून्। रोमान्टिक मुडमा अचानक परिवर्तन हुनाले तपाईंलाई धेरै नराम्रो लाग्न सक्छ। नयाँ परियोजना र खर्चमा रूचि नलिनुहोस्। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। आज आफ्नो जोडीसँग अन्य मान्छेको हस्तक्षेपले तपाईंको सम्बन्धमा हानि पुर्याउन सक्छ।
कर्कट : तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। वित्तीय अवरोधबाट बच्नको लागि आफ्नो बजेट हेर्नुहोस्। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। प्रेम महसुस गर्ने र आफ्नो प्रियसँग बाँट्ने भावना हो। प्रमुख व्यापार सम्झौतामा बातचीत गर्दा आफ्नो भावना नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन – आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
सिंह : खुशीको समाचार प्राप्त हुन सक्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। आज तपाईंले आफ्ना साथीको अनुपस्थितिमा उनको खुशबू महसुस गर्नु हुनेछ। तपाईंले निराशा भोग्नुहुनेछ – किनकि तपाईंले अपेक्षा गरेका पहिचान र पुरस्कार विलम्वित हुनेछन्। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
कन्या : आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् – मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने – तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। तपाईंको हावी मनोवृत्तिले आफ्ना सहकर्मीबाट आलोचना हुनेछ। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
तुला : गर्भवती आमाको लागि विशेष हेरविचार गर्नु पर्ने दिन। अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो। पुराना साथीहरू समर्थक र सहयोगी हुनेछन्। कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
वृश्चिक : तपाईंले आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु पर्नेछ – जसले तपाईंलाई परेशान र अत्यधिक त्रसित बनाउनेछ। सम्पत्ति सम्झौता कारोबार हुनेछ र त्यसबाट शानदार लाभ हुनेछ। आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। प्रेम सधैं आत्मीय हुन्छ, र तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ। तपाईंको काम पर्दा शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताको लागि सराहना गरिनेछ। आज यात्रा-मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। हालमा साँच्चै नै तपाईंको जीवन कठिन भएको छ, तर आज तपाईंले आफ्नो जोडीको प्रमोदवनमा आफैलाई पाउनुहुनेछ।
धनु : रचनात्मक सोखले तपाईंलाई तनाउमुक्त राख्नेछ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्। व्यवसायीको लागि राम्रो दिन। व्यापारको उद्देश्य लिएर अचानक गरिएको यात्राले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्; अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
मकर : मानसिक शान्तिको लागि केही दान र पुण्यको काममा आफूलाई समावेश गर्नुहोस्। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। परिवारको दायित्वलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंले लापरवाही गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना लिनु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंले आफ्नी प्रियतमाको निष्कपटता माथि शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ जसले आउँदा दिनहरूमा तपाईंको वैवाहिक जीवनको महिमा बर्बाद हुनेछ।
कुम्भ : मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। अध्ययन नगरेर बाहिरी गतिविधिहरुमा भाग लिनाले आफ्ना आमाबाबुका क्रोधको सामना गर्नु पर्छ। क्यारियरको योजना बनाउनु खेल झैं महत्त्वपूर्ण छ। आमाबाबुलाई खुसी पार्न दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नु राम्रो हुन्छ। कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ। तपाईं काममा जोड दिने हुनुहुन्छ भने रीस उठ्नेछ – तपाईंले कुनै पनि निर्णय लिनु अघि अरूको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। किनमेल र अन्य गतिविधिहरूले तपाईंलाई पूरै दिन व्यस्त राख्नेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
मीन : आफ्नो वजनमा ध्यान दिनुहोस् र धेर नखानुहोस्। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। कामको खिचलोले तपाईंको मन बाँधिन्छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै समय निस्कँदैन। आफ्नो प्रेमी जीवनमा तीतो तुच्छ कुराहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।